Zinedine Zidane oo Dib Ugu Soo Laabtay Kooxa Real Madrid Iyo Wararkii U Dambeeyay ee Ciyaaraha | Baligubadlemedia.com
Zinedine Zidane oo Dib Ugu Soo Laabtay Kooxa Real Madrid Iyo Wararkii U Dambeeyay ee Ciyaaraha
Real Madrid ayaa ku dhawaaqday in heshiis laba xili ciyaareed ah uu qalinka ku duugay tababaraheedii hore ee Zinedine Zidane oo dib ugu soo laabtay, kaas oo beddelaya Santiago Solari oo 14 ciyaarood oo kaliya shaqada hayey.
Soo laabashadaa Zidane waxay ku timid wada-hadal dheer iyo gorgortay shuruudo watay oo ay wada galeen Florentino Perez, kuwaas oo ugu dambayn keenay in Zidane uu yimaaddo Santiago Bernabeu oo bilihii uu ka maqnaa dhibaato weyn ay Real Madrid gashay.
Julen Lopetegui oo lagu beddelay ayaa bishii December shaqada laga caydhiyey, waxaana ku xigay Solari oo seeftu qaadday maanta.
Haddaba maxay yihiin shuruudaha Zidane miiska keenay ee madaxweynuhu u ballan-qaaday?
Sida uu qoray wargeyska The Independent ee kasoo baxa waddanka Ingiriiska, Zidane ayaa loo ballan-qaaday afar arrimood oo midda ugu horreysaa tahay in kooxda la keenayo laacibka reer Brazil ee Neymar oo xagaaga ay kooxdu ka shaqayn doonto sidii uu Santiago Bernabeu u iman lahaa.
Arrinta labaad ee loo ballan-qaaday ayaa ah in weeraryahanka da’da yar ee PSG ee Kylian Mbappe uu noqond uu noqon doono saxeexa labaad ee marka uu suuqu furmo ay samayn doonto kooxdu, iyadoo kasoo qafaalanaysa kooxdiisa hadda oo laba sannadood ka hor lacag badan ku garaacday saxeexiisa.
Qodobka saddexaad ayaa Florentino Perez waxa uu u sheegay Zidane inuu u keeni doono xiddiga Chelsea ee Hazard oo isaguba xiisaynaya inuu yimaaddo Bernabeu iyo midda afraad oo ah in xagaaga loo keeni doono laacibka khadka dhexe uga ciyaaara Tottenham ee Christian Eriksen.
Sida wargeysku sheegay, Real Madrid waxay suuqa gelin doontaa lacag dhan £300 milyan oo ay ciyaaryahannadan ku raadsan doonto, waxaana qayb ka noqon doona Gareth Bale iyo Luka Modric oo qaab isku-beddel ah loo isticmaali doono.
Si kastaba ha ahaatee, Zidane ayaa ugu dambayn kusoo laabtay Madrid, waxaanu hoggaamin doonaa ciyaarta Sabtida ay ku martigelinayaan Celta Vigo.